Ny orinasa mpitrandraka harena an-kibon’ny tany sy ny zon’ny ankizy | UNICEF Madagasikara
Ny orinasa mpitrandraka harena an-kibon’ny tany sy ny zon’ny ankizy
Rehefa miady amin’ireo olana mianjady amin'ny ankizy ny orinasa dia mandray andraikitra lehibe amin'ny fiainana ankehitriny sy ny hoavin'ny zanak'i Madagasikara ary ho amin'ny firoboroboan'ny firenena.
Ity boky ity dia natao ho an’ireo orinasa, fikambanana fiarahamonim-pirenena ary tompon’andraiki-panjakana izay maniry mba hitondra filaminana sy firoboroboana ho an’ny zanaka Malagasy ankehitriny sy ho avy ny harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara. Atolotra ho an’ireo mpiara-miombon’antoka rehetra mikendry ny hahatakara bebe kokoa ny fiantraikan’ny fisian’ny orinasa mpitrandraka harena an-kibon’ny tany eo amin’ny tontolo iainana, ny fiarahamonina ary ny fisainan’ny ankizy, ka tapa-kevitra ny handray andraikitra mba hahazoana vokatra tsara izy ity.
Mamaritra sehatra folo azon’ireo mpiara-miombon’antoka irotsahana, mba handrisihana ireo orinasa mpitrandraka harena an-kibon’ny tany hanaja sy hanohana ny zo sy ny fiadanan’ny ankizy ny kiboky. Manolotra dingana telo hahatongavana amin’izany izy.
Manana otrikarena lehibe hahafahana manatsara ny fiainan’ny ankizy ny tontolon’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara. Amin'ny alàlan'ny fidiram-bolan'ny hetra, afaka mandray anjara amin’ny fanatsarana ny fahazoana fitsaboana sy fanabeazana ary manampy ny ankizy hahomby eo amin’ny fiainana ny orinasa mpitrandraka harena an-kibon’ny tany. Ny asa mivantana sy ny fampiroboroboana ny toekarena eo an-toerana ataon’ireny orinasa ireny dia miteraka fidiram-bola ho an’ny fianakaviana ka hahafahany manokana vola hanomanana ny hoavin'ny zanany. Ny asa momba ny fitrandrahana dia mahakasika ny rehetra: ny lehilahy, ny vehivavy, ny antitra ary, mazava ho azy, ny ankizy. Ny ankizy matetika no tena marefo indrindra amin'ireo sokajin’olona ireo.
Noho ny fahazazana, fotoam-pivelarana haingana dia haingana ara-batana sy ara-pihetseham-po, mafy kokoa ary maharitra kokoa ireo voka-dratsy eo amin'ny fahasalama ara-batana sy ara-tsain’ny zaza noho ny an'ny olon-dehibe. Mahalana ny fisian’ny fakana ny hevitry ny ankizy momba ny asa fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, nefa dia izy ireo no tena mizaka ireo voka-dratsiny maharitra kokoa noho ireo sokajin’olona hafa. Amin'ny alàlan'ny fametrahana ny ankizy eo amin’ny toeran’ny mpiara-miombon’antoka, ny UNICEF dia ny manome vahana ny fahatakarana ny zava-misy ary manaitra ny saina amin’ny voka-dratsin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany miantraika amin'ny ankizy. Manentana ny orinasa mpitrandraka harena an-kibon’ny tany ny fiarahamonim-pirenena ary ny governemanta ihany koa ny UNICEF mba hifarimbona amin’ny fananganana tontolo mety ho an’ny ankizy.
Safidy Safidy azo atao Teny anglisy Teny frantsay